Dhibaatooyinka qoysaska dhibbanaha: Sii-hayaha guud wuxuu sii joogteeyaa dhaqanka Boeing ee macaashka xagga nabadgelyada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Shilalka dhibanayaasha qoysaska: Sii-hayaha guud wuxuu sii joogtaynayaa dhaqanka Boeing ee macaashka xagga nabadgelyada
Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Shilalka dhibanayaasha qoysaska: Sii-hayaha guud wuxuu sii joogtaynayaa dhaqanka Boeing ee macaashka xagga nabadgelyada
Boeing waxay ubaahantahay inay raadiso hogaan cusub oo leh khibrad muujisay iyo u heellan injineernimo weyn iyo wax soo saar aan iin lahayn
Guddiga Agaasimayaasha Boeing waxay sare u qaadeen da'da howlgabnimada qasabka ah ee fuliyaasha laga bilaabo 64 illaa 70
Calhoun wuxuu noqday agaasimaha guud ee Boeing qiyaastii nus bartamihii aasaaska 737 MAX
Laba shil oo Boeing 737 MAX ah ayaa galaaftay nolosha 346 qof
Dareenka ayaa si dhakhso leh ugu dhaqaaqay talaabada maanta ay qaadeen Boeing Board of Directors taasoo kor uqaaday da'da ugu yar ee howlgabnimo ee fulinta laga bilaabo 64 ilaa 70. Madaxa hada ee Dave Calhoun ayaa 64 jirsaday todobaadkan.
Calhoun noqday Boeing Maamulaha guud ee Janaayo 2020, qiyaastii kalabar bartamihii saldhigga 737 MAX ka dib laba shil oo galaaftay nolosha 346 qof.
Michael Stumo, oo ah aabaha Samya Rose Stumo oo shilka ku dhintay, ayaa yidhi, “Boeing waxay u baahan tahay inay raadsato hoggaan cusub oo leh khibrad la soo bandhigay iyo u heellan injineernimo weyn, wax soo saar aan iin lahayn iyo dib-u-maalgelinta ganacsiga muddada dheer. Calhoun wuxuu ahaa GE kuxigeenka iyo xubin katirsan guddiga maadaama ay tahay waqti gaaban iyo dhimista kharashka oo horseeday hoos udhacii ugu dambeeyay. 12-kii sano ee uu joogay Boeing, wuxuu sii waday qaabkii ay shirkaddu shaqada uga ceyrisay injineerada, howlaha muhiimka ah ee ka baxsan badda, iyo alaab-qeybiyeyaasha. Calhoun wuxuu u codeeyay in lagu kharash gareeyo macaashka si dib loogu soo iibiyo saamiyada oo kor loogu qaado qiimaha saamiga ee kobcinta fulinta. Uma codeynin inuu dib ugu maalgaliyo faa'iidooyinkaas naqshado ammaan ah, shaqaale tayo leh iyo wax soo saar heer sare ah. ”
Calhoun wuxuu ka mid ahaa guddiga Boeing ilaa 2009 intii lagu jiray horumarinta 737 MAX. Dhawaanahan, Boeing waxay ku dhawaaqday in diyaaradda la dejinayo markii la ogaaday horaantii bishan in cilado cusub oo koronto ay ku soo korortay diyaaradda.
Robert A. Clifford, oo ah aasaasaha iyo lammaanaha sare ee Clifford Law Xafiisyada Chicago iyo Hogaamiyaha La-taliyaha ee shilkii diyaaradii Boeing ee dalka Itoobiya laba sano ka hor, ayaa yidhi, “Rikoodhka dadweynaha ayaa muujinaya in Mr. Calhoun uu si qoto dheer ugu lug lahaa dhaqanka Boeing ee sare u qaadista. faa iidada lagahelo nabadgelyada. Shaqadiisii ​​sii wadatay ee Boeing ayaa gogol xaar u ah sii socoshada dhaqankaas. ”